Tanjona sy tanjona | Fiaretana haran-dranomasina
Dingana 1: apetraho ny tanjonao sy ny tanjonao
Ny dingana voalohany amin'ny drafitra drafitra stratejika dia ny mametraka tanjona matanjaka sy mazava izay mamaritra ny fahitana anao mba hahalalanao ny toerana tianao haleha. Avy eo dia mamaritra ny tanjona ianao - ny dingana ho amin'ny fomba handehanao any. Ny famantarana ny tanjona mazava sy ny tanjona manokana dia ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny paikady tsara ary hitarika ny sisa amin'ny ezaka ataonao.
Jereo ny famelabelarana fohy momba ny fametrahana ny tanjonao sy ny tanjonao:
Ampio ny sarinao ny tanjona, eritrereto ny sary lehibe. Lazao izay ho hitan'izao tontolo izao rehefa mahatratra izany ianao. Inona no ho hafa? Maro amin'ireo tanjontsika momba ny fiarovana no maharitra ary afaka mandray 5, 10, 20 taona na mihoatra mba hahatongavana. Ho an'ny tetikasa fampitaovana mahomby sy mahaliana dia eritrereto fohy kokoa - mifantoha amin'ny tanjona iray azo tanterahina amin'ny taona 3-5 sy ny tanjona izay azo tanterahina amin'ny volana manaraka 12-18.
Ny tanjonao dia tokony ho voafaritra manokana. Tokony hilaza mazava tsara izay tokony hitranga, aiza, ary rehefa, ary miaraka amin'iza. Ny tanjona tsara voaomana dia manome torolalana mazava momba ny dingam-pandaminana ary mampitombo ny fifantohan'ny tetikasanao amin'ny fomba manamarina, toy ny amin'ny jeografia, ny mpanatrika, ary ny fizotry ny fotoana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, SMART izany: voafaritra tsara, azo zaraina, azo tanterahina, azo tanterahina, ary voafehy. Azo atao ny manandrana manandrana manoratra tanjona SMART.
Ohatra: Atsaharo ny fiparitahan'ny karazan-javamaniry an-dranomasina any Hawai'i.
Tanjona tsara izany, saingy mety ho "SMARTer."
Ohatra SMARTer: Mampihena ny fisondrotan'ny karazan-javamaniry any an-dranomasina any Hawai'i amin'ny 80% amin'ny 2030. Ohatra amin'ny tanjona izay tsy SMART:
Atsaharo ny fiakaran'ny hafanana
Atsaharo ny fanjonoana tsy ara-dalàna
Raiso ny mpanao lalàna hametraka "programa maitso" bebe kokoa
Ny fampahatsiahivana tsy tapaka ny tenanao (sy ny ekipanao) amin'ny tanjonao dia afaka manampy amin'ny alàlan'ny asa ataonao isan'andro mba hahazoana antoka fa ny asa ataonao dia hanampy anao hifandray akaiky kokoa aminao.
Raha vao fantatrao ny tanjonao, ny dingana manaraka dia ny fizarana azy ho "tanjona matevina", ny dingana arahina amin'ny fanatratrarana ny tanjonao. Ny tanjona dia tokony ho SMART ihany koa ary azo noforonina amin'ny mpihaino izay tadiavinao hahatongavana, ny zavatra ataonao mba hitrangany, na ny dingana ao amin'ny drafitra fandaharam-potoanao.
Ohatra: Raha ny tanjonao no tanjonao "Hampihenana ny fisian'ny karazan-javamaniry any an-dranomasina any Hawai'i eo akaikin'ny 80% amin'ny 2030," ohatra tanjona iray dia ny: Mandidy ny fanjakana mpanao lalàna ho an'ny karazan-karazan-javamaniry indizena amin'ny 2020 mba hamoronana vola bebe kokoa amin'ny fanaraha-maso ny sisin-tany.
Ny fanentanana ny olona dia tsy tanjona SMART. Ny vahoaka dia be loatra ny mpihaino, ary ny fahatsiarovan-tena dia matetika dingana iray amin'ny fitondrantena izay hisy fiantraikany amin'ny tanjona iray. Mba hahafantarana bebe kokoa, manontania hoe nahoana aho no te-hanaitra ny sain'ny olona? Inona ny fitondran-tena tiako hovana amin'ny mpihaino? Iza no mila soniako politika na lalàna ho lalàna? Raha hitanao fa ny tanjonao dia ny hanaitra ny sain'ny olona, ​​dia mamporisika anao izahay handalina lalindalina kokoa mba hahitana ny tena tanjona tianao hotratrarina. Inona no antony ilana fanentanana bebe kokoa?
Ohatra: Raha ny fanatsarana ny fahasalaman'ny vatohara amin'ny faritra be fandroana no tanjonao, ny tanjona voalohany dia ny 'fampahafantarana ireo mpamboly an-tendrombohitra akaikin'ny haran-dranomasina momba ny maha-zava-dehibe ny haran-dranomasina.' Saingy ny fihenan'ny ranoff dia hisy fiatraikany tsara amin'ny haran-dranomasina, noho izany tanjona tsara kokoa dia: 'amin'ny taona 2020, mandresy lahatra tantsaha 40 any an-tendrombohitra hampiato ny fomba famafana tany izay manome anjara biriky ary hanadio sy hamerina hamorona ampahany kely indray mandeha' na 'Amin'ny taona 2018, sonia tantsaha 30 mpiorina an-tendrombohitra amin'ny programa mandrisika azy ireo mba hanolo-tena hisoroka ny fomba fanao amin'ny zaridaina izay manampy amin'ny fivelarana.'
Ny anjaranao (> 30 minitra atoro anao)
Ampiasao ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTanjona sy tanjona asamanokatra fisie PDF hanoratra ny tanjonao sy ny tanjonao.
Mametraka fanontaniana amin'ny fanoratana ny tanjonao:
Inona ny olana na olana sedrainao? Inona avy ireo vokatra mahazatra na goavana amin'ny olana?
Inona no fanovana azonao atao mandritra ny fotoana maharitra sy ny fotoana fohy?
Inona no tsy hitovizanao amin'ny toerana misy anao (fiarahamonina, fikambanana, sns) rehefa vitanao ny tanjona?
SMART ve ny tanjonao? (SMART = manokana, azo refesina, azo tratrarina (azo atao), azo tsapain-tanana amin'ny lafiny loharanon-karena/fahaiza-manao, ary voafetra ny fotoana)
Ny tanjona dia ny dingana ilaina mba hahatratrarana ny tanjonao. Ny tanjona dia tokony hifameno amin'ny hafa, saingy mety tsy voatery ho tapitra.
Raha vantany vao misy lisitry ny zava-kendrenao, dia mila manolo-tena azy ireo ianao. Eritrereto hoe inona no hanampy anao hanatratra ny tanjonao ary ampiasao izany tanjona izany mba hiasa amin'ny alàlan'ny dingana hafa. Mba hahomby, ny drafitry ny fifandraisana stratejika dia tokony hifantoka amin'ny tanjona tokana amin'ny fotoana iray, satria ny tanjona tsirairay dia afaka manana mpanatrika hafa izay mety mitaky hafatra sy tetikady samihafa. Tsy midika izany fa tsy hainao ny hampifanaraka ireo fampahalalam-baovao ireo amin'ny tetikasa tokana. Midika fotsiny fa ny ilanao handehanana amin'ny dingana famolavolana drafitra amin'ny tanjona tsirairay.
Mametraka fanontaniana mikasika ny fisafidianana sy ny laharam-pahamehana amin'ny tanjona:
Misy fotoana ve miankina?
Moa ve misy tsy maintsy hitranga amin'ny filaminana manokana? Azo atao ve ny mitranga samirery?
Iza amin'ireo mpanatrika no tanjoko mifandray?
Inona no tanjona mety hanan-kery indrindra amin'ny mpihaino?
Inona no tanjona tena mahomby indrindra?
Inona no tanjona mety hahatonga ny fiantraikany ratsy indrindra raha tsy vita izany?
Mora kokoa noho ny hafa ve ny manatanteraka?
Mandehana any amin'ny Dingana 2: Tombano ny sahan-kevitry ny ezaka ataonao
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampandrenesana fananganana seraseramanokatra fisie PDF ,
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMikasa ny Win® - tondrozotra hamoronana fampielezan-kevitra mahomby